Ny fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika dia mety hisy vokany amin'ny fahasalamany | Tontolo alika
Susy fontenla | | aretina
Mihalehibe hatrany izahay ary misy fiantraikany mivantana amin'ny biby fiompintsika koa izany. Mandany andro miasa izahay ary rehefa tonga any an-trano dia tsy te-hanao fanatanjahan-tena amin'ny alika, izay mahatonga ny lasa alikaola ihany koa ny alika ary miafara amin'ny hatavezina be loatra sy ireo olana hafa mifandraika amin'ity fomba fiaina ity.
Es ilaina mba hampitsahatra ny fomba fiaina mipetrapetraka ao amin'ny alika satria mety hisy vokany maro amin'ny fahasalamanao izany. Azo sorohina ny mipetrapetraka satria zanak'alika izy ireo ary azo iadiana rehefa lasa mijanona. Amin'ny ankapobeny, ny fampihetseham-batana isan'andro dia tena ilaina mba handanjalanjan'ny alika sy hahasalama azy.
1 Tompony sy alika
2 Fanatanjahan-tena isan'andro
3 Olana mipetrapetraka
Tompony sy alika
Amin'ny ankapobeny, ny zava-misy mifandraika mivantana ny tompona miaraka amin'ny fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika, satria mirona hanana fomba fiaina mitovy amin'ny tompony izy ireo. Etsy ankilany, misy ny tompona milalao fanatanjahan-tena fa avelany any an-trano ny alikany na avoaka amin'ny fitsangatsanganana fohy fotsiny, ka nahatonga ny alika lasa tsy dia manina. Izany no mahatonga ny zavatra voalohany tsy maintsy ovaintsika dia ny tompony. Io ilay tsy maintsy mailo fa ny alika dia tsy afaka madiodio. Raha ny hahatonga ny alika hiasa bebe kokoa dia tsy maintsy manova ny fahazarany andavanandro ny tompony. Raha tsy manao fanatanjahan-tena izy dia tokony hanomboka hanao izany ary raha nanao izany dia tokony hanomboka hanao izany ao amin'ny orinasa alika ihany izy. Isika tompona no voalohany manova ny fomba fiainantsika mba tsy hijanona eo intsony ilay alika.
Raha raisina ny taona sy ny toetran'ny alika dia tsy maintsy tanterahintsika izany karazana fampihetseham-batana isan'andro miaraka amin'izy ireo. Raha malalaka any amin'ny toeram-piompiana izy ireo dia mora ho azy ireo ny mihetsika ary raha mijanona eo izy ireo dia tsy maintsy milalao miaraka aminy fotsiny isika mba hanipazana ny baolina amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo manao fanatanjahan-tena kely. Rehefa milamina kokoa ny alika dia afaka mandeha tongotra lava kokoa isika ary mihazakazaka miaraka aminy aza. Ho hitantsika ny fomba ahitan'ny alika ny endriny ara-batana tsara isan'andro. Mba hahafahan'ny alika mahay mandanjalanja ary hisoroka io fomba mipetrapetraka io dia tsy maintsy ataontsika io fanazaran-tena io ho anisan'ny fanaony andavanandro. Misy ny alika izay manana fotoan-tsarotra kokoa, saingy resaka mandeha tsikelikely io.
Raha sendra mandany andro any ivelany isika na tsy afaka mamoaka azy dia afaka mandinika safidy hafa foana isika. Ohatra, hevitra tsara manakarama mpandeha amboa mba hahafahany mamoaka izany ary afaka mandeha an-tongotra mihoatra ny iray isan'andro isan'andro rehefa tsy eo izahay. Azo atao ny mividy kasety hilalaovana fanatanjahan-tena ao an-trano ary amin'izany dia aleo ny alika mandeha isan'andro isan'andro. Ny zava-dehibe dia ny fampihetseham-batana arak'izay tratranao ary ialanao ny fomba fiaina tsy mipetrapetraka.
Ny fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika dia manimba toy ny olona. Ny alika dia mety hiafara amin'ny lanjany be loatra noho ny fomba fiaina mipetrapetraka, indrindra raha omentsika sakafo betsaka kokoa noho ny natoro azy ireo na raha be kaloria izany. Ny fihoaram-be loatra dia mety hitarika amin'ny olana ao am-po, fa ao amin'ny tonon-taolana ihany koa. Matetika ny alika be loatra dia manana olana amin'ny tongotra, izay mitombo amin'ny taona sy ny osteoarthritis, ka miteraka fanaintainana amin'ny alàlan'ny tranga maro ny alika na tsy afaka mihetsika malalaka. Ny fomba fiaina mipetrapetraka dia midika koa fa ny alika dia tsy mandany ny angovo ananany, izay mety hiteraka olana amin'ny fitondran-tenany. Ara-dalàna raha alika tsy milalao fanatanjahan-tena no mamarana ny zavatra ary mamolavola fihetsika mahery setra mihitsy aza. Ankoatr'izay, ny fomba fiaina mipetrapetraka dia mifandray mivantana amin'ny aretina maro amin'ny alika, manomboka amin'ny diabeta ka hatramin'ny aretim-po ary olana amin'ny fiaraha-miasa. Ny olana mivantana indrindra dia tsy isalasalana fa ny lanjany be loatra, izay miseho alohan'ny karazana izay mora tohina, nefa mety hitranga amin'ny karazan-karazany rehetra raha mitohy ny fomba fiaina mipetrapetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fomba fiaina mipetrapetraka amin'ny alika, olana ary ahoana no hisorohana izany